Ubundlobongela ngumbono oyintloko wokuchaza ubudlelwane boluntu phakathi kwabantu, umxholo ogcwele umgangatho wokuziphatha kunye nezopolitiko . Sekunjalo, yintoni ubudlova? Ziziphi iifom ezithathayo? Ubomi buntu bungabikho kobundlobongela, kwaye kufanelekile? Le yile mibuzo emininzi enokuthi ingqwalasela ibundlobongela.
Kule nqaku siza kulungisa ubundlobongela bengqondo, obuya kugcinwa ngokuhlukileyo kwindlobongela emzimbeni kunye nodlova.
Eminye imibuzo, njengokuba Kutheni abantu benobundlobongela ?, okanye Ngaba ubudlobongela bungaba bulungisa? , okanye Ngaba abantu kufuneka bafune ukungabikho kobundlobongela? kuya kushiywa kwesinye isiganeko.
Ngokuqala kokungqinelana, ubundlobongela beengqondo bunokuchazwa njengolu hlobo lobundlobongela olubandakanya umonakalo wengqondo kwi-arhente ephulwa. Unobundlobongela beengqondo, oko kukuthi, nayiphi na ixesha apho i-arhente yenze ngokuzithandela ingcinezelo yengqondo kwi-arhente.
Ubundlobongela beengqondo bunxulumene nogonyamelo olwenyama okanye udlame lwentetho . Umonakalo owenziwe kumntu oye waba lixhoba lokuhlaselwa ngokwesondo akukona nje umonakalo ovela kwiimpawu zokulimala kwakhe okanye umzimba wakhe; ukuxhatshazwa kwengqondo kweso siganeko esinokubangela ukuba inxalenye yecandelo lobundlobongela obuqhubekileyo, obunokwenziwa kwengcinezelo yengqondo.
Izopolitiko zezoBugcisa zengqondo
Ubundlobongela beengqondo kubaluleke kakhulu kwiinjongo zezombusazwe.
Ubuhlanga kunye nobulili buye bahlaziywa njengolu hlobo lwezobudlova oorhulumente, okanye ihlelo lommandla, elichaphazela abanye abantu. Ukususela kumbono wezomthetho, ukuqonda ukuba ubuhlanga buhlobo lonyango nangona kungekho monakalo emzimbeni okhungulwayo kwixhoba lokuziphatha ngokobuhlanga, kuyisisombululo esibalulekileyo sokubeka uxinzelelo (oko kukuthi, ukusebenzisa uhlobo oluthile lokunyanzela ) kwabo indlela yokuziphatha iyintlukwano.
Ngakolunye uhlangothi, kuba kunzima ukuvavanya umonakalo wengqondo (ngubani onokuxelela ukuba umfazi uyabuhlungu ngokwenene ngenxa yokuziphatha ngokobulili bezazi zakhe kunokuba ngenxa yemicimbi yakhe?), Abagxeki bentlopheko yengqondo kaninzi zama ukufumana indlela elula yokuxolisa. Nangona ukuxhatshazwa kubangela ubunzima kwintlalo yengqondo, kunjalo, akukho nto inokungabaza ngayo ukuba ukunyanzeliswa kwengqondo kuzo zonke iintlobo kukubeka uxinzelelo lwengqondo kwi-agent: ukuvakalelwa okunjalo kuyaqhelana nabo bonke abantu, ukususela ebuntwaneni.
Ukuphendula kwiiNgqondo zonyango
Ubundlobongela beengqondo kubandakanya nezinye izinto ezibalulekileyo nezilukhuni. Okokuqala nokuphambili, ngaba kukufanelekile ukuba usabele ngendlela enobudlova ngokomzimba kwisenzo sobundlobongela ngengqondo? Ngaba, ngokomzekelo, sinokuzithethelela iimvukelo ezigwenxa okanye ezinobugonyamelo obwenziwe njengendlela yokusabela kwiimeko zobundlobongela ngengqondo? Cinga nangona imeko elula ye-mobbing, leyo (ubuncinci inxalenye) ibandakanya umthamo wezobundlobongela ngokwengqondo: ngaba kunokufanelekile ukuba usabele ngendlela yobundlobongela ukuze uhlasele?
Imibuzo ephakanyiswayo yahlula ngokwahlukileyo abo baxubusha ubudlova. Ngakwelinye icala bemi abo bajonga ubundlobongela emzimbeni njengendlela ephezulu yokuziphatha ngobundlobongela: ukusabela kwiindlobongela zengqondo ngokwenza ubundlobongela obuphathekayo kuthetha ukunyusa ubundlobongela.
Ngakolunye uhlangothi, ezinye zigcina ukuba ezinye iindidi zobundlobongela ngokwengqondo zingabangelona kunene nayiphi na uhlobo lobundlobongela obuphathekayo: ngokwenene kunjalo ukuba ezinye iintlobo ezimbi kakhulu zokuhlushwa zengqondo kwaye zingabandakanyeki umonakalo owenziwe ngqo tshutshiswa.
Ukuqonda Ulwaphulo-mthetho lwezengqondo
Nangona uninzi lwabantu luye lwaba lixhoba lento ethile yobundlobongela beengqondo ngexesha elithile lobomi babo, ngaphandle kweengcamango ezifanelekileyo zokuzibamba nzima kunzima ukucwangcisa izicwangciso ezifanelekileyo zokujongana nemonakalo eyenziwa yizo zenzo zobundlobongela. Kuthatha ukuthatha ntoni ukuphulukana nokukhathazeka kwengqondo okanye umonakalo? Indlela yokuhlakulela inhlalakahle yomntu? Ezi zinto zinokwenzeka ukuba ziphakathi kwemibuzo enzima kakhulu kunye nephambili, izazi zefilosofi, izazi zengqondo kunye neentlalo zenzululwazi kufuneka ziphendule ukuze zihlakulele ukuphila kwabantu ngabanye.
Ugqoke ngokufanelekileyo ukuloba kwimozulu yendawo
10 Amanqaku Ngama-Acids kunye neZiseko
Iimpawu ezizithandayo ezivela kubapostile abalishumi elinesibini
Umculo wePiano ngo "uNowa wokuqala"
Ifomu yamaReal Coral?